July 2016 – WarkaDalka.com
Somaaliya oo ka qayb galaysa Olymbiga
July 4, 2016 Warka DalkaLeave a Comment on Somaaliya oo ka qayb galaysa Olymbiga
Iyada oo ay dalalka caalamka isu diyaarinayaan ciyaaraha Olympic-ga ee bisha soo socota ka dhacaya magaalada Rio ee dalka Brazil, ayaa Soomaaliya orodyahannada matali doonna waxa ay hadda tababar kaga jiraan garoon ku yaalla Muqdisho. Maxamad Daud Maxamad iyo Maryan Nuux Muuse ayaa ka qeyb qaadan doona orodka 5000 ee mitir iyo 400 ee mitir, […]
Stoke City oo danaynaysa Nani
July 4, 2016 Warka DalkaLeave a Comment on Stoke City oo danaynaysa Nani
Tababare ku xigeenka kooxda Stoke City, Mark Bowen ayaa xaqiijiyay in kooxdiisu ay danaynayso iibsashada Nani oo baalaha uga dheeli jiray kooxda Manchester United. 29 jirka reer boortaqiis ayaa lagu wadaa in uu arbacada u safto qarankiisa marka ay magaalada Lyon foodka isku daraan Wales. Garoonka Old Trafford wuxuu ka tagay July 2015-kii isaga oo […]
Leicester City oo Nampalys soo iibsatay
July 4, 2016 Warka DalkaLeave a Comment on Leicester City oo Nampalys soo iibsatay
Kooxda Leicester City ayaa qandaraas afar sano ah kula soo wareegtay ciyaaryahan Nampalys Mendy oo dhexda uga dheella faransiiska. 24 jirkaas oo horay ula soo shaqeeyay Claudio Ranieri markii uu macallinka ka ahaa Monaco ayaa lacag aan la shaacinin ugu soo wareegaya kooxdan haysata horyaalnimada Ingiriiska. Kooxda Nice ee uu hadda u dheelayay ayuu ku […]
France oo ku tumatay Iceland
July 4, 2016 Warka DalkaLeave a Comment on France oo ku tumatay Iceland
Xulka kubadda cagta ee Faransiiska ayaa 5 gool ku xaaqay kooxda aan sidaa loo aqoon balse ciyaaraha wanaagsan maalmahan dambe soo bandhigaysay ee Iceland. Faransiiska ayaa maalinta Khamiista ah ee soo socota waxa uu nus dhammaadka koobka Qaramada Yurub ee Euro 2016 kula dheeli doonaa magaalada Marseille xulka haysta koobka adduunka ee Jarmalka. Natiijada ciyaarta […]
Xulka Jarmalka oo reebay Talyaaniga
July 3, 2016 Warka DalkaLeave a Comment on Xulka Jarmalka oo reebay Talyaaniga
Xalay magaalada Bordoex waxaa ka dhacday ciyaar xiisa badan oo loogu soo gudbayey semifiinalka koobka qaramada Yurub, waxaana isaga hor yimid Jarmalka iyo Talyaaniga. Cayaarta labada kooxood ma kala dhicin oo ma jirin qolo aad loogu awood sheegtay inkastoo xagga dhismaha jirka la dareemayey in Talyaaniga looga fiicnaa. Qaybtii labaad ayey goolasha caadiga ah ee […]